Banyere Anyị - Chinatown Grain Machinery Co., Ltd.
Chinatown Grain Machinery Co., Ltd. na-enye igwe na ọrụ zuru oke maka imepụta nri na ụlọ ọrụ nhazi ọka, dị ka igwe ọka wit, ụlọ ọrụ nri fodder, na ụlọ ọrụ osikapa. Rue ugbu a, ngwaahịa anyị gụnyere ngwaọrụ ndị na-ebugharị, ngwa ngwa nhicha, akụrụngwa egwe ọka, wdg. Ọtụtụ ndị ahịa achọpụtala ha n’ụlọ na mba ofesi.
Companylọ ọrụ ahụ na-elekwasị anya na ngbanwe teknụzụ, na-eme ka ikike ịmepụta na mma nke igwe. Companylọ ọrụ ahụ butere iwebata akụrụngwa ịkụcha laser, igwe mgbanaka CNC, CNC lathes na ngwa ọrụ nhazi ndị ọzọ.
N'otu oge ahụ zụrụ CNC machining center, CNC na-agwụ ike igwe, CNC lathe igwe, n'elu grinder, planing igwe na ndị ọzọ na elu nhazi akụrụngwa ego, na kwukwara electrostatic spraying mmepụta akara. The ngwaahịa àgwà nwere ike kwere nkwa site ndị a pụrụ ịdabere na n'ichepụta ngwá nkwado.
Anyị ụlọ ọrụ ịmụta ígwè efere laser ọnwụ igwe, CNC ekwe igwe, carbon dioxide aak ịgbado ọkụ na argon aak ịgbado ọkụ, ịgbado ọkụ ọnụ ọgụgụ, rotary akpaka ịgbado ọkụ, electrostatic spraying elu ọgwụgwọ, na-aga n'ihu mma na otutu ụdị. Ngwaahịa anyị abụghị naanị nwere arụmọrụ dị mma, mana ọ dịkwa mfe maka nrụnye na ndozi yana ọnụ ala. Ngwaahịa nwere teknụzụ dị elu, ogo a pụrụ ịdabere na ya, ma ọmarịcha mma ka ọtụtụ ndị ahịa nwere ekele.